DOLLY PARTON စိန်ခေါ်မှု - အင်တာနက်ကိုသုံးနေသောမှတ်စုအသစ် - သတင်း
ဤရွေ့ကားယခုအချိန်အထိ Dolly Parton စိန်ခေါ်မှု၏ 23 အကောင်းဆုံး memes ဖြစ်ကြသည်
အကယ်၍ သင်က Dolly Parton ဟာအသိအမှတ်ပြုဒဏ္endာရီဆန်ဆန်ဒဏ္endာရီဆန်ဆန်ဒဏ္wasာရီဆန်ဆန်အတွေးအခေါ်တွေလို့ထင်ခဲ့ဖူးတယ်ဆိုပါစို့၊ သူမဟာမသိရှိရသေးတဲ့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံးမှတ်တိုင်ကိုသူမအမှတ်တမဲ့ဖန်တီးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသူမသိသွားတဲ့အထိစောင့်ပါ။ အဆိုပါ Dolly Parton စိန်ခေါ်မှု။
Dolly လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကသူမ၏ Instagram ကိုပေါ်တွင်စာတန်းနှင့်အတူသူမ၏၏ဓာတ်ပုံတင်, သင်ကအားလုံးကိုလုပ်နိုင်သူအမျိုးသမီးတစ် ဦး ကိုရယူပါ။
Instagram မှတစ်ဆင့် @dollyparton
လူမှုရေးကွန်ရက်ပေါ်မူတည်ပြီးပုံက Dolly ကိုအသွင်အပြင်အမျိုးမျိုးဖြင့်ပြထားသည်။ ထိုအခါငါတို့ရှိသမျှသည်လူမှုမီဒီယာအပေါ်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရှိသည်, ရဲ့ရိုးသားကြကုန်အံ့။ သိသာထင်ရှားတဲ့သင့်ရဲ့အများဆုံးပရော်ဖက်ရှင်နယ်မိမိကိုယ်ကိုများအတွက် LinkedIn ။ အကျိုးပြုသောမိသားစုအတွက်ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကသင့်ကိုထောက်ခံသည်။ သင့်ရဲ့အံ့သြဖွယ်ဗေဒဘဝကိုပြသရန်အတွက် Instagram နှင့်ရေငတ်ထောင်ချောက်များအတွက် Tinder နှင့်မျှော်လင့်တစ် ဦး shag ရတဲ့။
လူတိုင်းကသူတို့ကိုယ်ပိုင် Dolly Parton Challenge ကိုထုတ်လုပ်နေပြီ။ နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေဟာ bandwagon ကိုပထမဆုံးခုန်ခဲ့ကြတာပါ၊ သူတို့တွေ LinkedIn ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသေချာမသိပါဘူး။ ယခု Instagram မှကျော်ကြားသောခွေးတစ်ကောင်မှ National Portrait Gallery သို့လူတိုင်းသည်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများတွင်ပါဝင်နေကြသည်။
Dolly Parton ကလူတွေကိုစည်းလုံးစေပါတယ်။ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောရရင်တော့ကျွန်တော့်ကိုဇန်န ၀ ါရီလကနေတစ်ဆင့်ရောက်ရှိစေခဲ့တာပါ။
ဤတွင် Dolly Parton စိန်ခေါ်မှုများရဲ့အကောင်းဆုံးရှိပါတယ်:
1. ဘုရင်မကြီး Tinder ရှိသနည်း
Instagram မှတစ်ဆင့် @graziauk
Instagram မှတစ်ဆင့် @glamourmag
Instagram မှတစ်ဆင့် @itsdougthepug
Instagram မှတစ်ဆင့် @friends
တိုင်းပလက်ဖောင်းများအတွက်စက်ရုံပုံစံ။ #dollypartonchallenge pic.twitter.com/3wHNaDGAFp
- ဒင်းဗားရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်များ (@botanic) ဇန်နဝါရီလ 23, 2020
သင့်ရဲ့အိမ်ထောင်ဖက် tinder ပေါ်နေလျှင်မည်သို့ရှာဖွေရမည်ကို
6. Gordon ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းစိတ်ကူးစိတ်သန်းမှဘာမှမချန်မထားချင်ပါဘူး
Instagram မှတစ်ဆင့် @gordongram
ငါစိန်ခေါ်မှုတွန်းလှန်လို့မရပါဘူး #dollypartonchallenge pic.twitter.com/lxylj1m3EQ
- ပါရီဒီယို Boris ဂျွန်ဆင် (@BorisJohnson_MP) ဇန်နဝါရီလ 24, 2020
၈။ Buffy ခေါ်စာရာ Michelle Gellar
Instagram မှတစ်ဆင့် @sarahmgeller
9. meme ဂန္သွားပြီ
Diana, Hunt ၏နတ်ဘုရားမ ??? pic.twitter.com/rel1SEqfwY
- Bloomsbury UK (@BloomsburyBooks) ဇန်နဝါရီလ 24, 2020
၁၀။ Liam Hemsworth (သို့) အီး! Liam အတွက်ဖန်တီးသတင်း
Instagram မှတစ်ဆင့် @enews
၁၁။ ဂျက်စီကာသည်သူမ၏ Instagram နှင့် Tinder pics များကိုမှားယွင်းစွာလမ်းလွဲစေသလား။
Tinder အပေါ်ငါ့နောက်သို့လိုက်။ pic.twitter.com/VnOk4gGgCn
- Jessica Chastain (@jes_chastain) ဇန်နဝါရီလ 23, 2020
ထောင်ထဲမှာ Chris watts ကသည်အဘယ်မှာရှိ
သူမတစ် ဦး လုံး meme ထိုက်သောကြောင့်, သူမ၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ် 12. Charlotte
Instagram မှတစ်ဆင့် @everyoutiftonsatc
၁၃။ Amy ဟာ Instagram ပဲ
ဂျိုသည် LinkedIn၊ ဗက်ကဖေ့စ်ဘွတ်၊ မေီသည် Instagram ဖြစ်ပြီး Meg သည် Pinterest ဖြစ်သည်
- ဆိုဖီ Wilkinson (@sophwilkinson) ဇန်နဝါရီလ 24, 2020
14. Terry Crews သည်ဆိုရှယ်မီဒီယာအားလုံးအပေါ်ချွေးထွက်နေသည်
Instagram မှတစ်ဆင့် @terrycrews
အန်ဒီ Sachs ငါ့ကိုဖြစ်ပါတယ်, ငါအန်ဒီ Sachs ။ #dollypartonchallenge pic.twitter.com/EwSoECiWsV
- ဘယ်သူတွေဝတ်ဆင်ကြမလဲ (@WhoWhatWear) ဇန်နဝါရီလ 24, 2020
ငါတို့မခံနိုင်ဘူး #DollyPartonChallenge ။
- Portrait Gallery (@NPGLondon) ဇန်နဝါရီလ 24, 2020
Instagram မှတစ်ဆင့် @ jennifer.garner
၁၈။ Miley tbh အားလုံးနီးပါးအတွက်အံဝင်ဂွင်ကျဖြစ်သည်
Instagram မှတစ်ဆင့် @mileycyrus
၁၉။ Instagram ပုံတွင်မိန်းကလေးဖြစ်ချင်သည်
Instagram မှတစ်ဆင့် @royalacademyarts
၂၀။ သင်ကြိုးပမ်းအားထုတ်ခဲ့သောကြောင့် Kyle Maclachlan အားကျေးဇူးတင်ပါသည်
Instagram မှတစ်ဆင့် @kyle_maclachlan
21. Wow, အိုး wow Ovie
Instagram မှတစ်ဆင့် @oviesoko
၂၂။ Timothée Chalamet သည် platform အားလုံးတွင်အလုပ်လုပ်သည်
Instagram မှတစ်ဆင့် @theststyle
ဝတ်လစ်စလစ်မိန်းကလေးတစ် ဦး ကိုဘယ်လိုကြည့်မလဲ
Instagram မှတစ်ဆင့် @Naomi
• ဤအ WW3 memes 30 ဒီပရမ်းပတာမှတဆင့်ရရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်ကြသည်
• ဘုရင်မမောင်းနှင်မှုနှင့်ပတ်သက်သောမှတ်စု ၂၆ ခုသည်သင်၏စိတ်ကို Megxit မှချန်ထားလိမ့်မည်
•ဤ 'အသံစဉ်အတွင်းအသံ' မှတ်စုများသည်သင့်အား megaphone ကိုဆက်သွယ်နိုင်သည်